Shiinaha oo cadaadis ku saaraya Somaliland inay joojiso xiriirka Taiwan | Keydmedia
Shiinaha oo cadaadis ku saaraya Somaliland inay joojiso xiriirka Taiwan
Safarka Jian ayaa yimid kadib markii ay Somaliland dhowaan oggolaatay inay Taiwan xafiis diblomaasiyasadeed ka furato Hargeysa kadib markii labada dhinac ay heshiis kala saxiixdeen.
HARGEYSA, Soomaaliya - Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya, Qin Jian, ayaa gaarey Caasimada maamulka Somaliland ee Hargeysa si uu ula kulmo madaxweyne Muuse Biixi iyo Madax kale.
Safarka Jian ayaa yimid kadib markii ay Somaliland oggolaatay inay Taiwan xafiis diblomaasiyasadeed ka furato Hargeysa kadib markii labada dhinac ay heshiis kala saxiixdeen. Beijing ay u aragto Taiwan inay qayb ka tahay Shiinaha.
Shiinaha waxuu si xoogan u diidey xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dhinac, waxuuna ku adkeysanayaa in Taiwan aysan geli karin heshiis diblomaasiyadeed.
Sida laga soo xigtay ilo dibloomaasiyadeed, dowladda Shiinaha waxay ku cadaadineysay Somaliland inay ka laabato xiriirka Taiwan, mana la oga inay arintaas aqbali doonaan Madaxda Maamulkan mudada dheer ictiraafka raadinayay.
0 Comments Topics: farmaajo muuse biixi somaliland tawain villa soomaaliya